I-Bietjie Rus - I-Cottage/Chalet - I-Airbnb
I-Bietjie Rus - I-Cottage/Chalet
Addo, Eastern Cape, eMzantsi Afrika
Ifama sinombuki zindwendwe onguSorita
USorita unezimvo eziyi-44 zezinye iindawo.
I-Bietjie Rus (ithetha ukuphumla okuncinci) yindawo encinci ehlala kwindawo entle yelizwe le-Sundays River Valley enegusha, iinkukhu ezizulazula simahla kunye nezinja ezi-4 ezinobubele. eyona ndawo ifanelekileyo kwaye inikezela ngokuzola ngokupheleleyo kunye nokuphumla. Umamkeli wakho uSorita sisikhokelo sendalo esiqeqesheke kakhulu ngeminyaka eli-18 yamava eAddo kwaye uthetha kakuhle isiJamani. Umamkeli wakho uyakuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na indlela anokuthi akwenze ngayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sorita
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Addo